Koox hubeysan oo saakay nin ganacsade ah ku dilay goobtiisa ganacsi ee ku taala suuqa Bakaaraha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Koox hubeysan oo saakay nin ganacsade ah ku dilay goobtiisa ganacsi ee ku taala suuqa Bakaaraha
Kooxo hubeysan oo ku labisan dharka ciidanka dowladda Soomaaliya islamarkaana watay mootadda Bajaajta ayaa saakay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dilay nin ganacsade ah, kadib markii uu ka dhaga adeegay inuu siiyo teleefan Mobile ah ee uu ninkaasi watay.
Ninka ganacsadaha ah ayaa la sheegayaa in la dilay xilli uu furaayay goobtiisa ganacsiga ee ku taalo suuqa Bakaaraha furaayay, wuxuuna ka mid ahaa ganacsatada caanka ah ee ka shaqeysata suuqa, gaar ahaan qeybta Malabka.
Dilka ninkaasi ayaa la sheegayaa inay ka dambeeyeen seddax nin oo watay mootadda nooca Bajaajta ah islamarkaana ku hubeysnaa qoryaha AK 47.
Nimankaasi ayaa rasaas ku furay ninkaasi ganacasadaha ah, kadib markii uu ka dhego adeegay inuu siiyo Mobile-ka uu watay, taasoo keentay in goobtaasi lagu toogto islamarkaana ay nimankaasi Mobile-ka qaataan.
Kooxihii dilka geystay waxay islamarkiiba ka baxsadeen goobta, iyadoona aanay jirin ciidan katirsan dowladda oo goobtaasi soo gaaray.
Tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho kusoo batay kooxo burcad ah hubeysan, oo xaafadaha magaalada ku dhax mara mootada Bajaajta ah, iyagoona dadka u geysta dhac iyo dhibaatooyin kale.